Umgangatho wePlywood, iPlywood engenaManzi, iPlywood yaseLwandle eLaminated-Yige Wood
I-chipboard / iBhodi yeNqanaba
Inkampani yethu igubungela ummandla we-1.2 yezigidi zeemitha zesikweri, singabanini be-100,000 m3 / ngonyaka umthamo weplywood yefenitshala, 300,000 m3/umthamo wonyaka we-DIFFENBACHER umgca wokushicilela oqhubekayo kunye noomatshini bokusika be-rotary abangaphezu kwama-50.
Iimveliso zethu ziphumelele i-iso9001, i-ISO 4001, isiqinisekiso se-CARB, kwaye zinamalungelo awodwa abenzi abangaphezu kwama-20. Kukho ngaphezu kwe-1,200 yabasebenzi abaqeqeshiweyo kunye nobugcisa, kwaye ngaphezu kwe-60 yobunjineli kunye nabasebenzi bezobugcisa.
Inkampani yethu ikwishishini lepaneli esekwe ngamaplanga ngaphezulu kweminyaka engama-20 kwaye inendawo yehlathi ezizigidi ezi-3 zeemitha. Ukunikezelwa kwezinto eziluhlaza kuzinzile ngakumbi kunye nokuqinisekiswa komgangatho.
Iminyaka engama-20 yamava emveliso yaseTshayina ...
I-Wholesale yoRhwebo ngexabiso eliphantsi isuntswana elingangenwa ngamanzi ...
Abavelisi bemithi abachwepheshile Abanexabiso eliphantsi kwaye balungile ...
4x8x1-35mm okoume/poplar/sapele ejongene Umgangatho a...
Iimveliso zinezatifikethi ze-ISO 9001, ISO 4001 kunye ne-CARB. Ngoku sigubungela indawo ye-1.2 yezigidi zeemitha zesikwere, abasebenzi abaqeqeshiweyo abangama-1200 kunye neenjineli ezingaphezu kwama-60.
I-Guangxi Hengxian Yige Wood Co., Ltd ibekwe kwipaki yoShishino lwaMahlathi lwangoku, kwiNqila yaseHengxian, kwiPhondo laseGuangxi, eTshayina. Kwipaki yoshishino, sinomzi-mveliso weplywood kunye nemigca yemveliso emi-6 kunye ne-60,000 m3 / ngonyaka umthamo weplywood yefenitshala; enye 300,000 m3/ umthamo wonyaka we-DIFFENBACHER umgca wokushicilela oqhubekayo onokuvelisa i-particleboard, i-OSB kunye ne-OSB yomgangatho ocolekileyo; kunye nangaphezulu kwama-50 oomatshini bokusika abajikelezayo ababonelela ngeveneer eyomisiweyo ekumgangatho ophezulu kwiisayizi ezininzi ezahlukeneyo.
uqeqesho lobuchwephesha kwiworkshop ngo-Oct 2021
Umahluko phakathi kwebhodi yoxinaniso kunye nebhodi yamasuntswana
Hongqi Linzhan, Shitang Forest Farm, Shitang Town, Nanning, Guangxi, China
Iimveliso ezishushu- Imephu yesiza- AMP Mobile